Sony ga-eweta ọgbọ nke abụọ nke PlayStation VR | Akụkọ akụrụngwa
Sony banyere inye ọgbọ nke abụọ nke PlayStation VR
Ebe ọ bụ na Sony tinyere PlayStation VR na ahịa, iko ndị a kwalite asụsụ ọma na-enwe egwuregwu nke PlayStation 4 aghọwo ndị kacha ere ahịa na-eti ndị na-agba aka mgba dị ka Oculus Rift na HTC Vive, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na ha adaghị n'otu otu njikọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụrụ ma ọ bụ na-eche maka ịzụrụ ha, ị kwesịrị ichere obere oge, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Japan na-arụ ọrụ na ụdị ọhụrụ nke nwere ike iru ahịa ahụ tupu njedebe nke afọ ruo ụwa niile, ebe ọ bụ na mbido ụbọchị mmalite ya. dị n'etiti Ọktoba.
Ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya gosipụtara na ọ na-arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ nke PlayStation VR site na FAQ nke ọgbọ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye, ọgbọ nke abụọ nke nọmba mbipụta ya ga-abụ CUH-ZVR2. Otu dị ugbu a n'ahịa bụ CUH-ZVR1. Otu n'ime mgbanwe ndị kachasị dị na eriri eriri isi, nke na ọgbọ nke abụọ a agbakwunye n'ime okpu agha ahụ n'onwe ya. A na-achọta ihe ọhụụ ọhụrụ na eriri njikọ, nke ga-adị obere, nke ga-enye ohere ịgbakwunye gbasaa ọrụ nke otu mgbe ịtọhapụ ngalaba nhazi ọhụụ.
N'oge a ga-ebido mmalite Japan na October 14, yabụ ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịnwe mmasị inweta ha, ha ga-echere izu ole na ole ruo mgbe ọnụ ọgụgụ mba ebe ịzụta ha gbasaa. Banyere ọnụahịa ahụ, n'oge ahụ ọ nweghị ihe a maara, mana ekwesịrị iche na ọ bụrụ na ọ kwụsị ire ụdị nke gara aga, ụdị ọhụụ ahụ ga-adị n'otu ọnụahịa ahụ, agbanyeghị na iwu azụmaahịa ahụ abụghị nke Sony na-ejikarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Sony banyere inye ọgbọ nke abụọ nke PlayStation VR
Kano na-ewetara laptọọpụ Mee N'onwe Gị maka ụmụaka
Ngwa kachasị mma iji ree ihe aka abụọ